အဆိုပါ PGA Tour ပေါ်မှကစားသမားချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ
အားကစားဆိုင်ရာ Tours မှ & ပြိုင်ပွဲများ
by Brent ကယ်လီ
လေးပါး၏အပြင်ဘက်တွင် ဂေါက်သီးဗိုလ်ကြီး , အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်ခရီးစဉ်အပေါ်အရေးအပါဆုံးပြိုင်ပွဲဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ဒါဟာ PGA Tour ရဲ့အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း (လေးရိုးရာဗိုလ်မှုး PGA Tour ထက်အခြားအဖွဲ့အစည်းများက run ကြသည်) နှင့်အချို့သော (အခြားသူများကြောင်းစိတ်ကူးကဲ့ရဲ့စဉ်) ကနောက်ဆုံးမှာအပြည့်အဝကိုအဓိက status ကိုရကြလိမ့်မည်ယုံကြည်နေသည်။ သို့သော်အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်အများစု၏အပြင်ဘက်တွင်, ကျိန်းသေခရီးစဉ်အပေါ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်လေဖြတ်ကစား 72 တွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိမေလတွင်ကစားနေသည်, သို့သော် 2019 ခုနှစ်မတ်လ, ကယင်း၏သမိုင်းတာများအတွက်သိမ်းပိုက်သည့် PGA Tour အချိန်ဇယားပေါ်မှာအချိန်ပြန်ရွှေ့မည်။
ဒီမှာဂေါက်ကွင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ကစားသမားများ '' ပုန်ကန်ခြင်း, ရန်ဘောလုံးကိုခိုးယူတဲ့ birdie ကနေပျက်စီးခြင်း watery မှကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်က "အများဆုံးထက် သာ. ကောင်း၏" မှ အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်မှာအများစုကအမှတ်ရဖွယ်လုပ်ငန်းခဏ ။
ဘယ်အချိန်မှာ: မေလ 10-13, 2018
အဘယ်မှာ: TPC Sawgrass, ပိုတငျး Vedra သဲသောင်ပြင်, Fla ။
si ဝူး Kim ကသုံးလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရဖို့တနင်္ဂနွေအပေါ် 68-69 ပစ်သတ်။ ဒါဟာဒုတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 21 နှစ်အရွယ်ကိုရီးယားများအတွက် PGA Tour အပေါ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ Kim ကသုံးရှေ့ဆက်ပြေးသမား-Up မှ Ian Poulter နှင့်လူးဝစ် Oosthuizen ၏, 10-အောက်တွင် 278 မှာကိုလက်စသတ်။ အဆိုပါအနိုင်ရ (သူ၏ 2004 အောင်ပွဲအတွက် 23 သူ) ယခင် recordholder အာဒံဖြစ်သူ Scott အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်, အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်မှာ Kim ကအငယ်ဆုံး-အစဉ်အဆက်ချန်ပီယံဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဂျေဆန်နေ့ဖြစ်ရပ်ရဲ့ 18-ပေါက်အမှတ်ပေးစံချိန်ထားခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့နှင့် 4-လေဖြတ်အောင်ပွဲနှင့်အတူကအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ နေ့ပထမဦးဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ 63 ပစ်သတ်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်ဘက်စုံ 66 သူ့ကိုပြိုင်ပွဲ 36-ပေါက်အမှတ်ပေးစံချိန်သတ်မှတ်ထားကြကုန်အံ့။ အမှတ်ပေးတစ်ခုလုံးကိုလယ်ကွင်းများအတွက်မြင့်တက်လာသောအခါသူကနောက်ဆုံးနှစ်ခုကျည်ကျော် 73-71 ပစ်သတ်။
နေ့, 15-အောက်တွင် 273 မှာပြေးသမား-up, ကီဗင်ချာပယ်လ်ငါးခုရှေ့ဆက်တက်အနာ။ ဒါဟာ 2016 နေ့ရဲ့တတိယ PGA Tour အနိုင်ရရှိနှင့်သူ၏ 10th ခြုံငုံဖြစ်ခဲ့သည်။
Ricky မုဆိုးသည်ချန်ပီယံဖြစ်လာရန်ထို့နောက်တစ်ဦးထက်ပိုသောရုတ်တရက်သေခြင်းအပေါက် 3-လမ်း, 3-အပေါက်, စုစုပေါင်း-ရမှတ် PLAYOFF အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ မုဆိုး, ဆာဂျီယို Garcia ကနဲ့ Kevin Kisner အားလုံး 12-အောက်မှာ 276. မှာပြီးဆုံး Garcia က 3-ပေါက်စုစုပေါင်း PLAYOFF ပြီးနောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်မုဆိုးနှင့် Kisner ရုတ်တရက်သေခြင်း PLAYOFF သို့ဆက်လက်အမှတ် 17 မှပြန်လာ၏။ ထိုအမုဆိုးအနိုင်ရဖို့ birdie ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်နစ်မြုပ်ပြီးတော့, လေးပေအတွင်းတစ် Tee ရိုက်ချက်ကိုနှိပ်ပါ။ မုဆိုး 11 လေဖြတ်အတွက်စည်းမျဉ်း၏နောက်ဆုံးလေးတွင်းကစားခြင်းအားဖြင့် PLAYOFF သို့သူ၏လမ်းအတင်းအကျပ်။ ဒါက TPC Sawgrass ၏နောက်ဆုံးလေးတွင်းကိုကျော်အနည်းဆုံးလေဖြတ်အသစ်တစ်ခုပြိုင်ပွဲစံချိန်ပါပဲ။
PGA Tour ကစားသမားချန်ပီယံရှစ်မှတ်တမ်း:
ယေဘုယျအား: 264 - Greg-Norman , 1994
ပြိုင်ပွဲသင်တန်းစံချိန်: 63 - Fred သည်စုံတွဲများ , 1992; Greg-Norman, 1994; ရောဘတ်ကက်စထရို, 2013; မာတင် Kaymer, 2014; ဂျေဆန်နေ့, 2016; Colt Knost, 2016
PGA Tour ကစားသမားချန်ပီယံရှစ်ဂေါက်သီးရိုက်သင်တန်းများ:
အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်သည့်အပေါ်နှစ်စဉ်ကစားနေသည် TPC Sawgrass မှာအားကစားကွင်းသင်တန်း , အထူးသဒီပြိုင်ပွဲကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတည်ဆောက်ဂေါက်ကွင်း။
ပိုတငျး Vedra သဲသောင်ပြင်, Fla အတွက် TPC Sawgrass, ။ , အမှတ် 17 မှာကျော်ကြားကျွန်းအစိမ်းရောင်တန်းတူ-3 featured နှင့်အမေရိကအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဂေါက်ကွင်းတစ်ဦးစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာ 1982 ခုနှစ်ကတည်းကအဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်၏ site ဖြစ်ခဲ့သည်။
အခွားသော Host ကသင်တန်းများ
အတ္တလန်တာ Country Club, Marietta, Ga ။ , 1974
ကိုလိုနီခေတ် Country Club, Fort Worth, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, 1975
Inverrary, G & CC ကို, Lauderhill, Fla ။ , 1976
Sawgrass Country Club, ပိုတငျး Vedra သဲသောင်ပြင်, Fla ။ , 1977-81
PGA Tour ကစားသမားချန်ပီယံရှစ်အသေးအဖွဲများနှင့်မှတ်စုများ:
အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်ပထမဦးဆုံးကပြိုင်ပွဲကစားသမားချန်ပီယံရှစ်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်သည့်အခါ 1974 ခုနှစ်အတွက်ကစားခဲ့သည်။ ဒါဟာအမည်ဖြင့်အဆိုပါကစားသမားချန်ပီယံရှစ်သို့ပြောင်းလဲလာသောအခါ 1988 ခုနှစ်, သည်အထိအမည်အောက်တွင်ကစားခဲ့သည်။
ဂျက် Nicklaus 1974 အတွက်ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Nicklaus လည်း 1976 နှင့် 1978 ခုနှစ်များတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့, ဤဖြစ်ရပ်၏သုံးဦးသာအချိန်ဆုရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
Two-အချိန်ချန်ပီယံများမှာ Fred သည်စုံတွဲများ (1984, 1996), Hal Sutton (1983, 2000), Davis ကမတ်ေတာသ III ကို (1992, 2003), စတိဗ် Elkington (1991, 1997) နှင့်က Tiger Woods (2001, 2013) ။
ဂျယ်ရီ Pate (1982) TPC Sawgrass မှာပထမဦးဆုံးရရှိသွားခဲ့သည်။
fuzzy Zoeller fuzzy များအတွက်ကံမကောင်းစွာ 1994 ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်း၌ဒုတိယမြောက်-နိမ့်ဆုံး 72-ပေါက်စုစုပေါင်း posted, Greg-Norman ကြောင်းထိုနှစ်တွင်ပင်နိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်းတင်ခဲ့သည်။ -Norman, Zoeller 268 264 ပစ်သတ်။
ဒီမှာဖြတ်စေရန်ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးကစားသမား - သူ 172 ရက်ပေါင်းအဟောင်း 55 နှစ်ရှိသောအခါအာနိုး Palmer ကအဆိုပါ 1985 ကစားသမားချန်ပီယံရှစ်အတွက်ဖြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဆယျနှစျအစောပိုငျးက, Julius Boros 174 ရက်ပေါင်း 55 နှစ်ကအသက်အရွယ်မှာ 1975 ပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြတ်လုပ် - Palmer က 1985 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်ထက်နှစ်ရက်ဟောင်းများကို။
ပြိုင်ပွဲသမိုင်း၌တစ်ဦးတည်းသာဂေါက်သီးအတူတူ tourney ၏လေးယောက်လုံးကျည်အတွက် TPC Sawgrass မှာကျွန်း-အစိမ်းရောင် 17 အပေါက် birdied သိရသည်။ ရှင်ပေါလု Azinger 1987 ထဲမှာကိုပြု၏။
2014 ခုနှစ်တွင်ပြိုင်ပွဲ 3-အပေါက်, စုစုပေါင်း-ရမှတ် format နဲ့မှရုတ်တရက်သေခြင်း PLAYOFF format နဲ့မှ switched ။ ကစားသုံးခုတွင်းအမှတ်ဖြစ်ကြသည်။ 16, 17 နဲ့ 18 ။
PGA Tour ကစားသမားချန်ပီယံရှစ် Winners:
2017 - Si ဝူးကင် 278
2016 - Jason နေ့, 273
2015 - Ricky မုဆိုး, 276
2014 - မာတင် Kaymer, 275
2013 - က Tiger Woods 275
2012 - Matt Kuchar, 275
2011 - KJ Choi, 275
2010 - က Tim Clark က, 272
ကစားသမားချန်ပီယံရှစ် Winners နှင့်ပြည့်ဝ၏စာရင်း
PGA Tour ဟူစတန်ပွင့်လင်း
7 Times ကဂေါက်သီးအမေရိကန်ပွင့်လင်းဂေါက်ကွင်းကျော်ဟာ USGA ဝမ်းခွဲ
အဆိုပါ PGA Tour နှေး Play စစည်းကမ်းများနှင့်ပြစ်ဒဏ်များဘာတွေလဲ?
ဘယ်လိုဂေါက်သီးအဆိုပါမာစတာပြိုင်ပွဲများတွင် Play မှခငျြးမီ
ANA က Inspiration တစ်ခု LPGA ဗိုလ်မှူးချန်ပီယံရှစ်
1993 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: PLAYOFF အတွက်-Norman vs. Azinger
2019 ခုနှစ်ဗြိတိသျှတို့ပွင့်လင်း: အိုင်ယာလန်အတွက်တစ်ဦးကဗိုလ်မှူးချန်ပီယံရှစ်
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ် Play မှအစဉ်အဆက်အသက်အကြီးဆုံးဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား
2017 Solheim ဖလား: ရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသင်္ဘောဥရောပကျော်အနိုင်ရမည်ဟုမှ
2013 Solheim ဖလား: ပြီးပြည့်စုံသော Hedwall Dominant ဥရောပစေသော
2000 မာစတာပြိုင်ပွဲ: Singh ကအစိမ်းရောင်သွား
Steroid တစ်မျိုးမရှိရင်ကောင်းကြွက်သား Size ကို Build ရန်ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
2010 ခုနှစ်ထိပ်တန်း 10 သတင်းများပုံပြင်များ
ဘောလီဘောတစ်ဦးသို့ပြန်သွားရန် Row တိုက်ခိုက်နားလည်ခြင်း
အဆိုပါထိပ်တန်း 25 Viral ကလေးများဗီဒီယိုများ
သင့်ကလေး (ဂေါက်သီးအတွက်) အဝေးသင် Add ကိုကူညီပါလုပ်နည်း
Archaeopteris - ပထမ "စစ်မှန်သော" ပင်
1980 ၏ထိပ်တန်း Pat Benatar သီချင်းများ
အီတလီကြိယာ conjugation: Decidere
ခရစ်ယာန်ကလေး Boy အမည်များ
နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
ဘယ်လိုသုတေသီများကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုမှစက်ရုံမှီငြမ်းထားမှုများ Exploring နေ
အက်ဖ်စကော့ဖစ်ဂျရယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများက '' မဟာဂက်စဘီ ''
ထိပ်တန်း 100 ပေါ့ပ်သီချင်းများ 2005
ဝါရင့်ဆရာများ မှစ. စမတ်အကြံဉာဏ်
'' ER '' အပေါ်အကြီးမားဆုံးနှင့်အများစုမှာမမေ့နိုငျဖှယျခဏ
စကားထူးများနှင့်ဖော်ပြချက် - လိုပဲ
ဒိုင်နိုဆောအဖြစ် 2016 သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ...
Acupressure ဘဏ္ဍာ: Hui ယဉ် - Ren 1